Cake Goop Recipe (Siideynta Guriga Lagu Sameeyo) - Farsamooyinka Cunnada
Marnaba uma baahnid inaad iibsato sii-deynta digsiga mar labaad ka dib markaad samayso keegaaga u gaarka ah!
Cake goop waa mid fudud oo fudud in la sameeyo oo shaqeeya mar kasta oo la sii daayo keega kaamil ah.
Dhab ahaan, waxaan jeclaan lahaa in qof ii sheego waxyaabahan cajiibka ah kahor. Waa doqonimo fudud oo waxay qaadataa daqiiqad kaliya in la sameeyo oo waad ogtahay waxa? Keegaaga ayaa soo bixi doona mar kasta. Warqad qoraal ah No bur iyo yaraynta khalkhalka. Looma adeegsan mindi si loo gooyo hareeraha geesaha. Mar dambe iibso buufin sii daayo digsiga!
keega lakabka leh buuxinta raspberry
Sida loo sameeyo digaag kuu gaar ah
Waa wax aad u fudud in la sameeyo sii deynta digsigaaga. Kaliya isku qas qaybaha u dhigma bur, saliidda cuntada iyo gaabin khudradda (ama margarine). Ka dib isku dar dhammaan wax ku jira qas a hoose ama gacanta walaaq. Haddii aad xoogaa buro leedahay, biggie ma jiro. Markay siman tahay oo isku mid noqoto, waad dhammaysay. Sax ma tahay?
Waxaan keydkeyga keega ku keydsadaa weel oo waxaan uga tagaa miiska dushiisa maxaa yeelay aad baan u isticmaalaa laakiin haddii aad rabto, taada ayaad ku ridi kartaa qaboojiyaha laakiin runti, ma xuma. Uma baahnid inaad ka walwasho.
Tilmaamaha guusha adoo adeegsanaya rootiga rootiga
Waayahay markaa waa wax fudud in la sameeyo, aad u fudud in la kaydiyo oo ka dhigaysa in keegaaga oo dhami u soo baxaan sidii riyadii oo kale. Runtii ma qasan kartid. KA MID AH haddaad wax badan isticmaasho. Waxaan jecelahay inaan ku dabaqo burcadayda keega burush macmacaan oo aan sameeyo xitaa jaakad fiican laakiin horaantii, waxaan ku yara waashay lakabyada waxaanan ku riday waxbadan. Tani dhab ahaantii dib ayey u noqon kartaa waxayna sababi kartaa keegaaga inuu ku dhego. Marka lakab khafiif ah oo fiican waa waxaad u baahan tahay oo dhan.
Keegagga qaar ayaa ku dhegi doona si kasta oo ay ahaato. Waxaad u baahan tahay inaad tan ogaato. Sababtoo ah haddii keegga ugu horreeya ee aad ku sameysid keega goop uu yahay strawberry oo dabiici ahaan tan tan sonkor ah ku jirta oo ku dheggan, magacayga waad habaari doontaa oo waxaad oran doontaa darn you Liz Marek! Been baad ii sheegtay.
Maya, waa uun keegga. Inta aan ka ogahay Keega strawberry , sonkorta qorfe iyo keegag qaar oo ay ku jiraan xaddi badan oo sonkor ah ayaa ku dhegi doona sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo wareegga waraaqaha ah sidoo kale si looga hortago dhejinta
Keegaga waaweyn mararka qaarkood waxay u baahan yihiin caawimaad yar oo ka soo baxda digsiga. Taasi macnaheedu maahan in digaaggaaga aan shaqeynin? Maya Mararka qaar salka keega ayaa ku dhegi kara saxanka dhab ahaan inuu diirimaad yahay sidaa darteed dhigista warqadda hoose ee saxankaaga oo ka weyn 12 ″ ama keegga xaashiyaha ayaa ku siin kara xoogaa yar oo maskaxeed ah. Waan qirayaa inkasta oo… Marnaba ma sameynin wax dhibaato ahna ima qabin * qoryo garaacid *
Cake Goof-Free Gake Goop
Waad ka dhigi kartaa keega goop-free-ka ah adigoo ku beddelaya burka burka aan lahayn gluten-ka sida bobs cas cas 1: 1 bur bur.
Cake Goop Recipe (sii daayaha guriga lagu sii daayo)
Marnaba dib uguma noqon doontid dukaanka la iibsaday ka dib markii aad sii deysid digsigaaga gaarka ah! Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado Wadarta Waqtiga:10 daqiiqado Kalori:818kcal
▢7 oz (198 g) gaabinta khudradda ama margarine
▢7.5 oz (213 g) saliida cuntada (ama saliida kale ee aad jeceshahay)
▢5 oz (142 g) bur ujeedo oo dhan
Ku rid dhammaan walxaha isku dhafan oo isku dar ilaa caddaan iyo isku mid ah. Ku keydi weel daboolan heerkulka qolka ama waad qaboojin kartaa. Ku dabool jaakad khafiif ah digsiyadaada keega ka hor intaadan dubin sifeynta aan iin lahayn mar kasta.
Kalori:818kcal(41%)|Kaarboohaydraytyada:31g(10%)|Protein:4g(8%)|Dufan:75g(115%)|Dufan Dufan:2. 3g(115%)|Sodium:3mg|Kaliumperyamper:44mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Kaalshiyamka:6mg(1%)|Bir:1.9mg(kow iyo toban%)
Cunto fudud Kukiyada Kirismaska
sidee looga ilaaliyaa in strawberry-ku ay xumaadaan
shukulaatada way dhalaali doontaa heerkulka qolka
Cake Pop cajiinka
Sidee loo sameeyaa cajiinka keegga ee loo yaqaan 'cake pop pop' oo loogu talagalay soo baxa keegga, keegagga ama lagu daro cabbirka keegaga la farsameeyay. Cajiinka cajiinka caaggu waa hab fiican oo loo isticmaalo kuwa haraaga ah keegga hadhay.
Cunnooyinka Kukiyada Sonkorta ugu Fiican
Cuntadani buskudka sonkorta leh ayaa ugu fiican! Kaliya maahan inay qaabkeeda hayso inta ay dubayso laakiin dhab ahaantii waxay dhadhamisaa wax cajiib ah! Kufiican cookies
Baro sida loo sameeyo keeggan xajmiga leh ee cajiibka leh faashka la laalay, jirridda geedka rustic la cuno iyo keega caleemaha gudaha! Waali qabow!